Global Voices teny Malagasy » Thailand: Telo taona aty aorian’ny Fanonganam-panjakana tamin’ny 2006 · Global Voices teny Malagasy » Print
Thailand: Telo taona aty aorian'ny Fanonganam-panjakana tamin'ny 2006
Voadika ny 28 Septambra 2009 11:12 GMT 1	 · Mpanoratra Markpeak Nandika Arimalala
Sokajy: Fitantanam-pitondrana, Politika, Tantara
19 Septambra 2006 no datin'ny fanonganam-panjakana farany tany Thailand, nanaovana sesitany ny Praiministra Thaksin Shinawatra. Telo taona aty aoriana, mbola tsy milamina ihany ny toe-draharaham-pirenena.
i Suranand Vejjajiva, iray amin'ny mpikambana ao amin'ny kabinetran'i Thaksin izay nolazaina ho mpandalina ny haino aman-jery ary lasa mpanao politika, dia nanoratra lahatsoratra mahaliana eo amin'ny Bangkok Post: Telo taona nidinana an-dalam-be,mbola eo amin'ny sampanan-dalana ihany i Thailand 
Manondro ny tetikadin'i Thaksin ny fijeriny, izay hafa noho ny an'ireo mpitondra hafa teo aloha nesorin'ny fitondrana miaramila:
mijanona ho tahotra ho an'ny fitondrana vaovao i Thaksin any ampandosirana, telo taona aty aorian'ny nanalàna azy tamin'ny toerany. Antony iray ny toetrany “tia ady”, nefa koa tsy nisy nitovy tamin'ny fototry ny fahefan'i Thaksin mihitsy.
Tsy naharesy lahatra mihitsy izy teo amin'ny Fanjakana na nandritry ny fiarahana miasa taminy na tsia, na dia nanomboka nanagon-karena aza izy tamin'ny alalan'ny fananany finday sy ny zanabolan'ny governemanta.
Vaovao ny aferany, ny modely vaovao tonga dia afa-miasa. Afaka nanangona vola niaingana izy , mivelatra sy haingana noho ny mpanao afera hafa tamin'ny alalan'ny ambin'entana teny an-tsena.
Ary ny fahaizan'i Thaksin mitantana na ny afera na ny politika no nahafahany nanangana rafi-pandaminanna eo amin'ny fiainany amin'izao.
Nanosika azy lavitra ny fampiarahana ny harena sy ny fahefana niaraka tamin'ny rafitry ny mpiasa biraon'ny governemanta, betsaka tamin'irep mpikambana no manohy manohana azy hatramin'izao, na dia eo aza ny famonoana nataon'ny mpitarika ny mpanongana sy ny famotehana ataon'ny governemanta ankehitriny amin'ny fitaran'ny tambajotrany.
Mitanisa antony roa ihany koa i Suranand manohana an'i Thaksin: ny fanekena ny demokrasia tao aorian'ny fianjeran'ny kaominisma tany Atsimo-atsinanan'i Azia sy ny tsy fetezan'ny mpiasa birao Thailandais hiatrika ny fangatahan'ny vahoaka.
Raha fehezina, nilaza i Suranand fa sarotra ho an'i Thaksin sy ny hery mpanohitra (miaramila, mpiasa birao sy ny Governemanta demokraty amin'izao fotoana) ny hamaha ny olana anatin'izy ireo. Izay mahavita izany no hitondra an'i Thailand mandritry ny folo taona manaraka.
Mazava ho azy, manana ny tsininy i Thaksin, ary efa miatrika ny vokatr'ireo fanararaotam-pahefana nataony izy amin'izao. Niaiky ny manampahefana ambony eo amin'ny politika fa na dia toa mivatravatra aza ny fisehony, mbola sarotra ho azy ny tena hiverina eo amin'ny fahefana- aleo aloha izy hiverina hody – raha jerena ny hamaroan'ny fahavalo ara-politika natsangany.
Eo andanin'izay koa anefa,tsy nisy nahavita nanakana an'i Thaksin tsy hahazo ny vahoaka amin'ny ankapobeny, na ny fitondrana izay nisolo toerana azy, i Gen Surayud , mpisolo toerana tsy voafidy sy ny fitambaran'ny mpitondra demokratika amin'izao fotoana, raha izy ireo miatrika ny olan'ny fanarahan-dalàna ara-demokratika, sy ny fahafahana miatrika ny olana ara-toekarena, ary ny fahaizana mitantana ny governemanta – izay taratra vao haingana, ary mbola mihantona, noho ny fisafidianana izay ho lehibe vaovaon'ny polisy.
Tsara vakiana. Afaka manaraka ihany koa an'i Suranand ao amin'ny Twitter  ianao.
Maro ny blaogy milaza ny fitsingerenan'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 19 Septambra .Misy ohatra vitsivitsy ireto:
Nanadihady fohifohy an’ i Gen. Sonthi Boonyaratglin, mpitarika ny miaramila tamin'ny 2006 i NaDao , mpanao gazetim-bahoaka eo an-toerana. Nilaza i Sonthi fa tamin'ny 2006, hanala olona iray ihany no heviny, i Thaksin, izay nahatonga ny korontana ary nino fa hitambatra ny firenena. Niaro ny nataony izy tamin'ny fanakianany ny firefarefan'ny zavabita sy ny fanapahan-kevitra tsy mety nataon'ireo mpiasa biraon'ny governemanta (notendreny) ho isan'ny antony nahatonga ny olan'ny firenena taorian'ny fanonganana.
Lahatsoratra iray hafa avy amin'ny ankolafy manohitra an'i Thaksin. Newgeneration  mitanisa ireo tsinin'i Thaksin nandritry ny fanjakany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/09/28/3515/
 Telo taona nidinana an-dalam-be,mbola eo amin'ny sampanan-dalana ihany i Thailand : http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/24044/three-years-down-the-road-thailand-is-at-a-crossroads
 i NaDao: http://www.oknation.net/blog/petpetpe/2009/09/19/entry-1